Izinhlokodolobha ZaseMpumalanga Ephakathi | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Iziqondiso, travel
Ephakathi Ephakathi. Lesi sifunda somhlaba besisematheni isikhathi esingaphansi kweminyaka engamashumi amahlanu. Ngokwengxenye ngoba iyindawo enothe kakhulu ngamafutha, kepha ngenxa yalokhu, izingxabano zezepolitiki ziqubuka zilandelana.
Ngaphezu kwalokho, iyi- indawo ebalulekile emlandweni wesintu futhi amaningi amadolobha alo anezinkulungwane zeminyaka ubudala. Ngeshwa izingqinamba ze-geopolitiki zenza eziningi zazo zingakwazi ukuvakashelwa, kepha sinethemba elikhulu lokuthi ukuthula kuza kubo ngolunye usuku futhi singazijabulela. Okwamanje, yazi ezinye zefayela le- Izinhloko-dolobha zaseMpumalanga Ephakathi lapha
1 Ephakathi Ephakathi
2 Izihloko-dolobha zase-Middle East
Ihamba ngamagama ahlukahlukene, i-Middle East, i-Middle East, i-Middle East, kanye ne-West Asia. Kuyisifunda esibanzi ukuthi itholakala phakathi kwe-Indian Ocean nolwandle IMedithera inani labantu, ngaphandle kokumbalwa, ikakhulukazi amaSulumane. Ngaphezu kwalokho, iyagxila izinqolobane zikawoyela ezibaluleke kakhulu emhlabeni ngakho-ke kusukela ngekhulu lama-XNUMX bekulokhu kuseso lesiphepho, ngomqondo ongokomfanekiso.
Kusenemibuzo engachazeki mayelana nokuthi imaphi amazwe akha iMiddle East futhi angenayo noma ayingxenye, kepha kwamukelwa kabanzi ukuthi esewonke Amazwe ayi-17 ngaphakathi kwale ndawo. Lokhu kufaka phakathi iSaudi Arabia, i-United Arab Emirates, i-Israel, i-Iran, i-Iran, iJordani, iLebanon, i-Oman, i-Kuwait, iQatar, iSyria, i-Yemen, iZifunda zasePalestine, iGibhithe, iCyprus kanye neTurkey.
Singaqala ngezihloko-dolobha zamazwe angavakashelwa. Isibonelo, i-UAE, Saudi Arabia, Israel, Turkey, Jordan, Lebanon, Qatar, Cyprus, noma Egypt. Ake sibheke kuqala eRiyadh, inhloko-dolobha yaseSaudi Arabia.
IRiyadh iyinhloko-dolobha nedolobha elinabantu abaningi eSaudi Arabia. Itholakala maphakathi nenhlonhlo yase-Arabia futhi yize inamakhulu eminyaka yomlando ukuthuthukiswa kwayo kwaqala ngawo-40 Ikhulu lama-XNUMX ngesandla sika-Shah Saud, eligqugquzelwe amadolobha aseMelika. Ngakho-ke, yahlelwa kabusha njengegridi enezindawo, imigwaqo nezindlela futhi abantu baqala ukwanda kancane ngemuva kwalokho.
Ama-90s awazange abe nokuthula esifundeni hhayi eRiyadh lapho kade ekhona ukuhlasela kwamaphekula kubhekiswe kubantu bendawo nakwabezinye izizwe, lokhu okwenziwa yi-Al Qaeda neYemen, okuyidolobha elibhekene nemicibisholo yalo. Ngokusobala lesi simo asidingi ezokuvakasha kepha kuhlale kunabantu abafuna ulwazi ...
Isimo sezulu somile futhi siyashisa ngakho-ke ehlobo amazinga okushisa makhulu futhi ahlala edlula ama-40 ºC. Uma uthatha isinqumo sokuvakashela ungavvakashela idolobha lasendulo Ngaphakathi kwezindonga, kuyingxenye encane kakhulu kepha lapho ungabonga khona i-Riad yakudala.
Ingabe lapha Fort Masmak, lobumba nodaka olunemibhoshongo nezindonga eziwugqinsi. izindlu ezindala, i- Isigodlo saseMurabba Kusukela eminyakeni yama-30s yekhulu lama-XNUMX, inkulu, futhi ungahlala uthatha uhambo oluya emadolobhaneni aseduze. Ungangeza ukuvakasha ku- UMnyuziyamu Kazwelonke waseSaudi Arabia futhi kuya I-Royal Saudi Air Force Museum.
I-Abu Dhabi iyinhloko-dolobha ye-United Arab Emirates futhi ngenani labahlali ingemuva kweDubai. Usesiqhingini esibunjwe njengohlamvu T ePersian Gulf Igama lakhe, dabi, Kubhekiswa kuzinsephe ebezihlala kule ndawo ezicebe kangaka ngempucuko eminingi. Lapha kunemikhondo yamasiko asendulo ngakho-ke kuyisimangaliso semivubukulo. Ngaphambi kokutholakala nokuxhashazwa kukawoyela, u-Abu Dhabi wayebandakanyeka kwezentengiselwano.
Futhi idolobha elinamahlobo amahle kakhulu uma ungakugwema ungahambi phakathi kukaJuni noSepthemba. Izinyanga ezihamba phambili kusuka ngoNovemba kuya kuMashi. Ngemuva kwalokho ungahamba ngokunethezeka phakathi nendawo nge ama-skyscrapers, ukujabulela kwakhe uphahla noma amapaki ayo, kufaka phakathi i- Ipaki yaseLake noma i IGugu lePaki. Uzobona futhi okukhulu nokubabazekayo ISheik Zayed White Mosque noma ungavakashela i- U-Abu Dhabi Louvre noma i Umhlaba weFerrari.
I-Amman iyinhloko-dolobha yaseJordani futhi izimpande zawo zibuyela kuNeolithic. Yidolobha lesihlanu elivakashelwa kakhulu ama-Arabhu futhi inamagugu amaningi emivubukulo kusuka ezikhathini ezahlukahlukene njengoba amaGrikhi namaRoma nawo ayehamba lapha.
Kuningi umlando ku IJordani Museum, uma ufuna ukwazi ngosaziwayo imiqulu yolwandle efile, i-Archaeological Museum, iRoyal Automobile Museum kanye neFolk Museum.
IDoha iyinhloko-dolobha yaseQatar futhi kungekudala sizokwazi kabanzi ngayo ngoba izoba ngenye yezinkundla ezizoba seNdebeni yoMhlaba yebhola elandelayo. Lokhu ogwini lwePersian Gulf futhi idolobha elibaluleke kunazo zonke ezweni. Yasungulwa engxenyeni yokuqala yekhulu le-XNUMX futhi kuyinhlokodolobha kusukela ngo-1971 ngenkathi iQatar ikwazi ukuyeka ukuba ngumvikeli waseBrithani.
Ithole umhlaba omningi olwandle futhi ine- isimo sezulu esishisayo kakhulu nesogwadule. Uma uthanda iminyuziyamu ungavakashela i- Imyuziyamu Yobuciko BamaSulumane kanye ne-Arab Museum of Art Modern. Kukhona futhi i- I-Fort Al Koot, indlela ehamba ngamakhilomitha ayisikhombisa ubude, idolobhana lamasiko eKatara kanye ne-Al Waab Park enhle futhi eluhlaza.
IBeirut ingelinye lamadolobha amadala kakhulu emhlabeni futhi selakhiwe iminyaka engaphezu kwezinkulungwane ezinhlanu. Yi- inhlokodolobha yaseLebanon namaGreki kanye namaRoma, amaSulumane, amaKhosi kanye nama-Ottoman nawo adlulile kuwo kamuva. Ngisho namaFrance ngemuva kweMpi Yezwe Yokuqala. Kwakukade kungumuzi okhuthele futhi onamasiko kakhulu, hhayi ngeze kwaziwa njenge "IParis yaseMpumalanga Ephakathi."
Kodwa konke kwaphela ngawo-70 ngempi yombango, iMpi yaseLebanon eyalandela, kanye nokungqubuzana ne-Israel. Ngeshwa abakaze bathuthuke ngoba namhlanje idolobha lingufakazi ukuhlaselwa kanye nezinkinga zomnotho. Kepha, uma uthatha isinqumo sokuyivakashela, kunezindawo eziningi ezithakazelisayo: isikhungo somlando saseBeirut ngamapaki, izikwele nezindawo ezinomlando ezinezindawo zabahamba ngezinyawo nemigwaqo yebhodi enamakhefi amaningi.
Uzobona izakhiwo eziningi zaseFrance nezamaGothic, yize kungekho ukushoda kwezitayela eziningi ze-Ottoman. Phakathi Amasonto e-Crusader namasulumane ukuya emanxiweni amaRoma. Ubuhle. Amadolobha afana neJerusalem noma iCairo ahlala emapayipini kodwa sesike sakhuluma ngawo kwesinye isikhathi. Bese kuba khona ezinye izinhloko-dolobha zaseMpumalanga Ephakathi ezinjengeWest Bank, iDamaseku, iSana'a noma iMuscat okungabavakashi abavakashela kakhulu abangathanda ukuvakashela namuhla. Sibashiyela okunye okuthunyelwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Izihloko-dolobha zase-Middle East
Izindawo ongazibalekela ngempelasonto
Izindawo ongazibalekela zothando